galmudugnews.com » Wariye Warbixin xasaasiya ka qoray Galmudug State sedex bil kadib+Video
Home » WARARKA » Wariye Warbixin xasaasiya ka qoray Galmudug State sedex bil kadib+Video Wariye Warbixin xasaasiya ka qoray Galmudug State sedex bil kadib+Video admin on
Nov 12th, 2012 //
No Comment Views 163948Galmudug oo Madaxweyne sharciya yeelatay.
Dhawaqa rasaasta hubka nuucyadiisa kala duwan ayaa ruxay Magaaladda Galkacyo 11 November 2012 ,saacadu markey ahayd 4:30 Galabnimo,kadib markii Madaxweynahii hore ee Galmudug Mohamed Ahmed Caalin uu ku dhawaaqay inuu xilka si rasmiya ugu wareejiyay Madaxweynaha cusub ee Galmudug Mohamud Abdi (Tima kalajeex).
Rasaasta dhaceysay waxaa ridayay Ciidamo taabacsan Madaxweynaha cusub ee Galmudug kuwaas oo ku faraxsanaa in loo caleemasaaray Madaxweynenimada Galmudug .
Magaalada Galkacyo oo laba u qeybsan waxaa dhinaca Koofurta Wadooyinka waxaa isugu soo baxay Gaadiidka Dagaalka,Ciidamo hubeeysan iyo Dad rayida oo dabaaldeg u sameeynayay Madaxweyne Mohamud Abdi (Tima kalajeex).
Dad badan oo ku nool Koofurta Galkacyo ayaa ka argagaxay gurxanka rasaasta jiho walba laga riday maxaa yeelay gobolka ay ku nool yihiin ee Mudug loogama baran in rasaasta dabaaldeg loo rido.
Caruur iyo haween warmooga ayaa guryahooda gabaad ka dhigtay halka bulshada degta Waqooyiga Galkacyo qiyaasteen inuu dagaal ka dhex qarxay Siyaasiyiin tan iyo bishii Augosto 2012 isku heystay Madaxweynenimada Galmudug .
Dad badan oo colaada neceb ayey neef weyn ka soo fuqday markii Rasaastii ruxday Galkacyo ee la moodayay dagaal ,noqotay mid loogu dabaaldegayay caleemasaarka Madaxweynaha cusub ee Galmudug Dr Tima kalajeex.
Dhoolatuska ay sameeyeen Ciidamadda taabacsan Madaxweynaha xilka la wareegay iyo Madaxweynahii xilka wareejiyay ayaa la rumeeysan yahay in deb ridkoodu ahaa dhoolatus ay ku muujinayaan awoodooda Ciidan taas oo argagax gelisay Hogaamiye kooxeedka Abdi Hassan Cawale Qaybdiid oo mar sheegtay inuu yahay Madaxweynaha is doortay ee Galmudug State.
Abdi Qaybdiid oo Hay”adaha Amnesty International iyo Human rights Watch ku eedeeyeen inuu gumaad iyo tacadiyo ka baxsan bini-aadamnimada kula kacay dad rayida waxaa damaciisii hogaaminta Galmudug saqiiray Madaxweynahii hore ee Galmudug Korneyl Caalin oo xilkii Madaxweynenimada ku wareejiyay Mohamud Tima kalajeex oo lagu doortay doorasho ay abaabuleen gudigii doorashada ee Madaxweyne Caalin magacaabay.
Madaxweynaha cusub ee Galmudug State Dr Mohamud Tima kalajeex waa aqoonyahan ka soo shaqeeyay Bankigii dhexe ee Somalia oo Book la xiriira dhaqaalaha uu ka qoray hasse yeeshee dhinaca kale waxaa lagu tilmaami karaa ninkii sedexdii sano ee ugu dambeysay daaha gadaashiisa ka hagayay Maamulka Galmudug taas oo ka dhigan inuu markiisii horeba ka fogeyn Madaxtooyadda Galmudug State of Somalia.
Galmudug oo micnaheedu yahay Maamulka Galgaduud iyo Mudug wuxuu ka tirsan yahay saxiixayaashii qariirada Nabadda Somalia ee Road Map.
Si kastaba ha ahaatee, Galmudug State sedex bilooda oo khilaaf ragaadiyay kadib waxay yeelatay Madaxweyne sharciya.
Popular post by viewDaawo Video Dahir Alasow oo abtirsaday maxaase u galay Dhulbahante iyo Samaroon - 21143 hitsContact US - 19983 hitsHalkaan Dhageyso Madaxweynaha Somalia oo Faroole meel saaray - 19587 hitsDaawo Faysal Cali Warabe oo Wariye amakaag ku riday - 16375 hitsXiriirka ka dhaxeeya burburka qoysaska & kacsi la'aanta - 16188 hitsDaawo gabadh u dhalatay beesha Daarood oo si qatara u hadashay - 14879 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo iyo Madaxtooyada oo noqotay Dance Club - 14340 hitsDukumiinti sira: Akhri Liiska Lacagta Madaxda Dowladda KMG u taal Dahabshiil +Cadadka iyo faahfaahintooda - 14305 hitsDaawo Video jabka Al-Shabaab ee Beledweyne - 14006 hitsDaawo Video Mohamed Kaahin oo dagaalyahanada Garxajis qabteen iyo Siilaanyo oo Habaryoonis u hanjabay - 13781 hitsDaawo tumashada Marwada Madaxweyne Siilaanyo - 12874 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 12665 hitsDaawo Wareysigii ugu xiisaha badnaa taariikhda oo Faysal Cali Waraabe lala yeeshay - 12620 hitsDilaagii Khaarijiyay Agaasimihii Waagacusub oo Muqdisho lagu dilay - Walaalkii oo seexan La? - 12337 hitsRag ka dhashay Qabiil yar oo bilaabay hab dhaqankii Gaalgalaha 1988-1990 ! - 12067 hitsTopnews:- Dagaalka Farmaajo iyo Ibbi oo Weji qabiil yeeshay. - 11962 hitsDAAWO Fadeexad Siilaanyo oo Baska Dadweynaha ku tegay Hotelkii Istanbul+Boorsada uu xambaarsan yahay. - 11683 hitsXaqiiq Cadeyn Wadata : Kismaayo, Daarood iyo Hawiye yaa dadka deegaanka ah?Faallo Xog iyo xaqiiqo warran ah - 11604 hitsTopnews:- Heshiiskii Kampala oo fashil qarka u saaran iyo Iscasilaadii Farmaajo !! - 11591 hitsDhageyso Sarkaal Mareexana oo Hawiye si xun u caayay - Bashiir Jeneral Dhiin - 11579 hitsLaundring of dollar black Money surges the price of Somaliland shillings - 11463 hitsIla qosol Daawo Faroole maxaa ku dhacay - 11319 hitsWariye qiimeen ku sameeyay sababaha Al-Shabaab uga baxeen Muqdisho - 11255 hitsSheekha ugu weyn Wahaabiyada Daarood oo ku baaqay in cafis la weydiisto Ahlusuna - 11247 hitsDaawo qabyaaladii Reer Puntland oo noqotay dawada Hawiye - 11043 hits Home About